अभिनेता रबर्ट होसिन: जीवनी, चलचित्र फोटोग्राफी, फोटो
रबर्ट ओसिन रूसी दर्शकों को बारे मा जान्दछन्, सबै भन्दा माथि, खूबसूरत एंजेलिका को बारे मा फिलिमहरु को श्रृङ्खला देखि अरिस्टोक्राफ जियोरी डे पेसारक को भूमिका। तथापि, धेरै थोरै व्यक्तिले थाहा पाउँछ कि वास्तवमा अभिनेताले आफ्नो परिवारलाई रूसी आप्रवासीहरूको नेतृत्व गर्दछन् र उनीहरूलाई पनि राम्ररी बोल्छ। ओएसिसिनको क्या क्यारियर चलचित्रमा सुरु भयो र उनीहरूको आमाबाबु के हो?
रबर्ट ओसिन: जीवनी, फोटो, प्रारम्भिक वर्ष
रबर्टको वास्तविक नाम अब्राहाम हुसेनभो छ। उनको पिता, आमिनोला हसिनोव, समरकंदबाट भएको थियो। 1922 मा, तिनी मेडिकल शिक्षा प्राप्त गर्न बर्लिन गए, तर सङ्गीतको प्रेमले जित्यो, र अमिनोला एक संगीतकार बने। रोबर्टको फ्रान्स फ्रान्समा बस्नुभयो, आफ्नो नाम अन्ड्रे ओसेनलाई बदल्दै। उनको पुत्र अभिनेत्री अन्ना मिकिन्कोभयाया को जन्म दिए, जो कि प्रवास को समय ले धेरै समय को लागि सेन्ट पीटर्सबर्ग मा रहयो।
यसकारण, जसको जीवनी रूसी दर्शनमा व्यावहारिक रूपमा अज्ञात छ, रबर्ट ओशिनसँग रूसी संस्कृतिको सीधा सम्बन्ध छ। उनको आमाले तिनीसँग उनीसँग कुरा गरेका थिए। त्यसोभए, जब रूसी पत्रकारहरूले फ्रांसीसी अभिनेताबाट साक्षात्कार लिन्छन्, उनीहरूले रूसी बोल्ने प्रयास गर्छन्।
15 बर्षको उमेरबाट उनको आमाको उदाहरण पछ्याउँदै केटा थिएटर स्टूडियोमा कक्षाहरू उपस्थित भए। त्यसपछि तिनले रेनिमी साइमनको अभिनय पाठ्यक्रमबाट स्नातक गरे र अचानक सिनेमा र थियेटर दुवैको मागमा पाइयो।
नाटकीय र अभिनय क्यारियर को शुरुआत
"ग्रैंड गिङ्गेल" को चरण मा कार्य गरे को लागि रबर्ट ओसीन, जीवनी र भाग्य को धेरै सफल भएको थियो। यो डरलाग्दो पेरिस थिएटरको नाम थियो। त्यहाँ, पहिलो पटक, रबर्टले आफैले निर्देशकको रूपमा प्रयास गरे।
1956 मा डाइरेक्टर जर्जेस लामेनले ओस्हेनलाई डोस्टोभस्की द्वारा "अपराध र सजा" भन्ने फ्रांसीसी फिल्म संस्करणमा मुख्य भूमिका खेले। पछि देखि, रबर्टका कामहरू माथि गएका छन्: उनले फिल्मको असंख्य मुख्य भूमिका खेल्छन् - "खबरदार, गर्भनिरोधी", "स्वतन्त्रताको अधीनता", "तपाईं जहर हुन्", "जासूस रात", आदि। एक लामो समय को लागि वहाँ अभिनेत्री मरीना व्लाडी, जो ओसीन को पहिलो पत्नी पनि थियो।
तथापि, रबर्टका लागि मात्र उनको भूमिका खेल्न पर्याप्त थिएन। 1955 मा फिर्ता, लिपिहरू लेख्न थाले र त्यहि वर्षमा तिनले आफ्नो पहिलो फिल्म "द स्कोउन्ड्रेल्स जाऊ नरक" राखे। कुल मिलाएर, ओसेनले 10 चलचित्रहरू बनाए।
बर्नार्ड बोर्डरी को स्क्रीन संस्करण मा शूटिंग
वास्तवमा, उनको जीवनी सफल रबर्ट ओसिन राम्रो तरिकाले निर्देशक बर्नार्ड बर्डरी को कारण सफल भएको छ। बोरीरी सबै स्क्रिन कृतिहरु "तीन मुस्केट गायकहरु को लागि दुनिया भर मा जानिन्छ। मेरो लेडी को बदला "र" तीन मुस्केट "। रानी को लटकन। " यस व्यक्तिलाई साँच्चै थाहा थियो कि ऐतिहासिक चलचित्रहरू कसरी बनाउने र यसलाई सुन्दर रूपमा गरौं।
60 को बर्डरीमा एनी र सर्ज गोल्सनको उपन्यासहरू फिल्ममा सेट गरिएको छ, लुई XIV को अदालतमा भव्य एन्जिलिकाको रोमांचमा समर्पित। कुल, पाँच रंगीन फिल्महरू योजना बनाइयो, जसमा रबर्ट ओसेनलाई मुख्य पुरुष भूमिका दिइएको थियो।
ओसेनको प्रदर्शनमा जियोफ्रे डे पेसारकले संसारभरका महिलाहरु संग प्रेम गरे। अभिनेता एक लुगामुखी नायक को भूमिका को सबै भन्दा राम्रो कलाकार थियो जुन सैनिक लुईस को उत्तराधिकारी विरुद्ध विद्रोहीहरूले विद्रोह गरे। लुईस अमीर र रात्रि महानगरीय एक खतरामा देख्छन्, त्यसैले उनी दाँतमा जलाउँछन्, जादुई दण्डको भ्रामक आरोप लगाउँछन्। धेरै वर्ष पछि यसले पाक्रालाई बाँचेको छ र अब लुइसको बेदरीको साथ समुद्रमा रहेको छ, रिकोटरको छद्म नाम लिन्छ।
जस्तो कि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, फिल्म को साजिश धेरै आकर्षक छ। एन्जेलिकाको बारेमा राम्ररी चित्रित चित्रहरू मद्दत गर्न सकेन तर कलाकार सार्वभौमिक मान्यता र ईर्ष्या ल्याउन सकेन।
सिनेमामा अन्य कामहरू
तथापि, न केवल "एंजिलिका" अभिनेता रबर्ट होस्सिन पनि भनिन्छ। कलाकारको जीवनी धेरै योग्य परियोजनाहरूसँग जोडिएको छ।
67 औं मिनेटमा ओस्टेनले नाटकलाई "म Ras Rasin" मा मारिए, जो रूसमा कार्य गर्दछ। परिदृश्यको लागि क्रमशः ऐतिहासिक घटनाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न, विशेषगरी ग्रेगरीको मृत्यु, ओसेनले व्हाइट ग्यार्ड अफिसरसँग सल्लाह लिनुभयो, जुन फ्रान्समा धेरै साम्राज्यवादी साम्राज्यको यस साम्राज्यको साम्राज्यबाट साम्राज्यवादी साम्राज्यबाट छ। निर्देशक आफैले एक प्रमुख भूमिका - सर्गेई सुखोटोन लिनुभयो।
70 मा, चार्ल्स अज्नावोर संग एक साथ , रबर्टले अपराध फिलिम "द टाइम ब्वाइट " मा अभिनय गरे। र, अवश्य, हामी कम्युनिस्टको भूमिका उल्लेख गर्न सक्दैनौं, जो Osssein एक्शन चलचित्र "व्यावसायिक" मा खेले। यो टेप रूसको प्रारम्भिक90 मा अत्यन्त लोकप्रिय थियो। यसमा एक प्रमुख भूमिका जीन पल बेलमोडोद्वारा खेल्न सकिन्छ।
रबर्ट ओसिन: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
निस्सन्देह रबर्ट सधैं रूसी संस्कृतिमा संलग्न महसुस गर्यो, किनभने उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि पूर्वी स्लालिक मूलको महिलाहरुतर्फ सारियो।
रबर्ट ओशिन, जसको जीवनी को रुचि हो उनको व्यक्तिगत जीवन भन्दा कम नहीं, तीन पल्ट विवाहित भएको थियो। पहिलो पटक, उनको छनौट मरीना व्लाडी थियो, जसको वास्तविक नाम पोलिकोवा हो। यस विवाहमा, अभिनेता दुई छोरा जन्मेका थिए, जुन इगोर र पत्रुस भनिन्छ।
दोस्रो पटक, रबर्टले फेरि एक रूसी महिला - एक निश्चित क्यारोलिन एलिजास्क, जसको पिता पनि रूसी साम्राज्यको मूल निवासी थिए र उनीहरूलाई फिल्म निर्माताको रूपमा फ्रान्समा भेट्थे। क्यारोलिनले एक अभिनेता बच्चालाई जन्म दिए।
तेस्रो छनौट एक - क्यान्डिस पटूले चौथो छोरा ओसीना दिए।
विश्व प्रसिद्ध अभिनेताहरू। "फिर्ता फर्कनुहोस्" - हास्य द्वारा टोड फिलिप्स
"अपरेशन" राष्ट्रको रंग ": अभिनेता, फिलिम चालक दल
कुन भाषामा शब्दहरू कार्टुनहरूबाट "उजुरी म" र "खनिज"
भगवान बेलीश को चरित्र ("सिंहासनको गेम")
जन्म महिना द्वारा महिला को प्रकृति: एक संक्षिप्त विवरण
'ग्लिसरीन सोस्पेसिटरी': प्रयोगको लागि तयारी र तयारीको संरचना
Anime प्रेम बारे: सबै भन्दा राम्रो फिलिमहरु को सूची। प्रेम कार्टून र विद्यालय नजर के
धातु ट्यांक को आत्म-गरे मोडेल। ट्यांक को मोडेल: एक खेलौना वा कलाकृतिहरू को संग्रह?
जो उत्पादनहरु कोलैजेन र hyaluronic एसिड समावेश?
Astreas बीच होटल3* (Protaras, साइप्रस): समीक्षा, वर्णन, संख्या र समीक्षा
फोन स्वतन्त्र परीक्षा। फोन विशेषज्ञता कहाँ गर्ने? फोन परीक्षा: समय
"ब्रिटिश पेट्रोलियम": गतिविधिहरु को विवरण
जस्टिन Bruening: जीवनी
के आँखा अन्तर्गत नीलो सर्कल गराउँछ?
सोभियत संघ पहिलो मेट्रो खोल्न हुँदा? मेट्रो को इतिहास
Evrochehol: ग्राहक समीक्षा